१० तस्वीरमा ग्याल्यमरस् नायिका सुष्मा कार्की
साफ यू–१५ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल र बंगलादेश भिड्दै
भुटानमा जारी साफ यू–१५ महिला च्याम्पियनसिपमा आज (शुक्रबार) नेपाल र बंगलादेश प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले पहिलो संस्करणको विजेता बंगलादेशसंग खेल्न लागेको हो । थिम्पुमा हुने खेल स्थानीय समय अनुसार दिउँसो ३ बजे शुरु हुनेछ ।
प्रतियोगिताको फाईनल पुग्न नेपाललाई बंगलादेशविरुद्वको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । पहिलो खेलमा नेपाल भारतसंग ४–१ को फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो । बंगलादेशले पहिलो खेलमा घरेलु टोली भुटानलाई २–० गोल अन्तरले हराएको थियो ।
आजै हुने अर्को खेलमा भारतले भुटानसँग खेल्नेछ । भारत र बंगलादेश दोस्रो खेलमा जित निकाल्दै फाईनल यात्रा तय गर्न चाहन्छन् । राउण्ड रोबिन लिगका शीर्ष दुई टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण बंगलादेश र दोस्रो भारतले जितेको थियो ।
दशैं विदामा यी हुन सक्छन् घुम्न जाने गन्तव्य्र
पछिल्ला समय नेपालीहरुमा विदाका दिनहरुमा घुम्न जाने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ । निरन्तरको काम र थकानबाट दिक्क हुँदा सोचिन्छ-‘कतै घुम्न जाने’ । आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरु विदा वा फुर्सदमा भ्रमणका लागि विदेशसम्म पुग्छन् भने मध्यम वर्गीय मानिसहरु स्वदेशकै विभिन्न स्थानमा पुगेर रमाइलो गर्ने गर्छन् ।
दशैंमा परिवारसँग मात्र नभई साथीसङ्गी घुम्न जाने प्रचलन पनि छ । विशेषगरी दशैंको लामो विदामा घुम्न जाने चलनको विकास भएको छ ।
न त चिसो न त गर्मी । यो मौसम घुम्नका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो छ । यो दशैंमा भरपुर मनोरञ्जन लिने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसकालागि घुम्न जाने गन्तव्य तय गर्नुस् । स्वदेशमै यस्ता रमणीय स्थानहरु पनि छन् जहाँ पुग्दा आनन्दको अनुभुति मिल्नेछ । त्यसमध्ये केही स्थानबारे हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौं ।
नेपालको प्रसिद्ध पर्यटीय स्थल हो पाखरा । जहाँ घुम्न जानका लागि वर्षभरि नै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको घुँइचो हुने गर्छ । फेवातालमा पर्ने माछापुच्छ्रेको छाँया हेर्दै डुंगा चढ्न र रमणीय हिमालहरु अवलोकन गर्न होस्, पोखरा पुगेपछिको आन्नद छुट्टै हुन्छ ।
पोखरामा डेबिड फल, गुफा पस्न, छाँगा छहरा हेर्न, बिन्दावासिनी, तालबराही लगायतका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको अवलोकन गर्न पाइन्छ । साथै पोखरामा प्याराग्लाइडिङको समेत मज्जा लिन पाइन्छ ।
काठमाडौंबाट सार्वजनिक सवारी साधन पनि पोखरा सजिलै पुग्न सकिन्छ । साथै निजी सवारी साधनमा जाँदा पनि सडकको अवस्था राम्रो भएकाले पोखरा पुग्न धेरै सयम लाग्दैन । हवाइ सेवामार्फत त झन १५ मिनेटमा नै पोखरा पुग्न सकिन्छ ।
खप्तड सुदुरपश्चिमको प्रसिद्ध र धार्मिक स्थलका रुपमा रहेको छ । पश्चिम नेपालको ४ पहाडी जिल्लाहरु बझाङ, बाजुरा, डोटी अछामको संगम स्थलका रुपमा पनि चिनिन्छ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई । फराकिला फाँट हेर्नकै लागि पनि आन्त्रिक र बाह्य पर्यटकहरु यस निकुञ्ज पुग्ने गर्छन् ।
समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ५ सय मिटरसम्म उचाइमा रहेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ५ सय ६७ थरिका वनस्पतीहरु र नेपालमा पाईने ८ सय ५० किसिमका चराचुरुंगीमध्ये साढे दुइ सयभन्दा बढि चराचुरुङ्गी पाईन्छन् ।
बाह्रै महिना पानीको सतह एकैनासको हुने विशेषता रहेको डेढ सय मिटर लम्बाई र ५० मिटर चौडाई रहेको खप्तडमा खप्तड दह रहेका छन् भने ५२ वटा ताल दह रहेका छन् । साथै यस निकुञ्जमा रमणीय नागढुंगा, खापर दह, सहस्र लिंग, त्रिवेणीधाम, पाटन, खप्तड दह (ताल), खप्तड बाबाको आश्रम समेत रहेका छन् ।
खप्तड पुग्नका लागि काठमाडौंबाट धनगढीको बसमा यात्रा गर्नुपर्छ भने त्यहाँबाट डोटीको सिलगढीसम्म बसमै यात्रा गर्न सकिन्छ । त्यससँगै पैदल यात्रा गर्नुपर्नेछ । साथै निजी सवारी साधनमा पनि खप्तड पुग्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय पर्यटकको मन लोभ्याइरहेको छ राराले । सुमन्द्री सतहबाट २९ सय ९० मिटरको उचाईमा रहेको रारा ताल जान अहिले सहजता समेत भइसकेको छ । रारा तालको लम्वाई ३ दशमलव २ किलोमिटर र गहिराई १ सय ६७ मिटर छ । यो ताल कुल १० दशमलव ८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
यस तालमा विश्वका अन्यत्र नपाइने ‘स्नो टाउट’ प्रजातिका माछा पाइन्छन् । घामको किरणसँगै राराले आफ्नो रंग बदल्ने गर्छ । प्रकृतिको उपहारका रुपमा सृजित राराताललाई रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको मनोरम हरियाली यसमा पाइने कस्तुरी, रतुवा, जस्ता जन्तुहरुको साथै डाँफे र अन्य चरा चुरुङ्गीहरुको समेत देख्न पाइन्छ ।
रारा पुग्नका लागि हवाई तथा स्लथमार्ग दुबैको प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थलमार्ग हुँदै निजी सवारी साधनमा जाने हो भने ताद नजिकैसम्म पुग्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा जाने हो भने काठमाडौंबाट ३२ घण्टामा जुम्ला सदरमुकाम खलंगा पुग्न सकिन्छ । खलंगाबाट सिन्जा उपत्यका हुँदै मुगु सदरमुकाम गमगढी जाने बस पाइन्छ भने त्यहाँबाट रारा पुग्न ५ घण्टा हिड्पर्नेछ । यसका साथै साना बसहरु रिजर्भ गरेर पुग्न सकिन्छ ।
आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लोभ्याउने स्थानमध्ये पर्छ मुस्ताङ । आन्तरिक पर्यटकहरु मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न पुग्नेगर्छन् । हिमालपारीका जिल्लाको नामबाट चिनिने यो जिल्ला धौलागिरी र निलगिरी दुई अग्ला हिमशिखरको विचमा अवस्थित छ ।
मुस्ताङमा अर्को रमणीय स्थल पनि रहेको छ त्यो हो मार्फा । जहाँ वरीपरी पहाडले घेरिएको छ भने बिचमा रहेको मार्फा गाउँ निकै सुन्दर रहेको छ । यहाँ पर्यटकका लागि चाहिने सुविधासम्पन्न होटल तथा रेष्टुरेन्ट पनि छन् अझ मार्फा स्याउ उत्पादनको क्षेत्रमा प्रख्यात छ ।
मुस्ताङकै अर्को रमणीय स्थान हो कागबेनी । जहाँ नेपाली फिल्म तथा गितहरुका लागि सुटिङ गर्ने क्षेत्र पनि हुन् यी । हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थल पनि हो कागबेनी ।
नेपाल आउने बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाईमा पर्ने अन्नपुर्ण पदमार्ग समेत कागबेनीमै पर्छ । कागवेनीमा ७ सय वर्ष पुरानो काग छोंदें थुप्तेन साम्फेल लिड गुम्बा अवस्थित छ । प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले पनि यो क्षेत्र निकै अगाडी रहेको छ ।
मनाङ जिल्लामा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिर हिन्दू र बौद्धमार्गीहरुका लागि एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो । मुस्ताङका यी रमणीय स्थानमा पुग्नका लागि बस रिजर्भ गरेर जानुपर्छ । त्यससँगै मुस्ताङ पुग्नका लागि पोखराबाट जोमसोमसम्म हवाइमार्ग पनि जान सकिन्छ । त्यसपछि पैदलमार्ग हुँदै जान सकिन्छ ।
चितवन (सौराहा) चितवन पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा चिनिन्छ । चितवनको सौराहा, मेघौली, सिराई चुली, उपरदाङगढी, लामो झरणा लगायतका रमणीय स्थलहरु अवलोकन गर्नका लागि चितवनमा पर्यटकको घुँइचो लाग्ने गर्छन् । काठमाडौंबाट मुग्लिन हुँदै १ सय ६५ किलोमिटर सडकको दुरीमा चितवन पुगिन्छ ।
दशैं विदामा चितवन घुम्न जानेहरुका लागि अर्को आकर्षक गन्तव्य सौराहा पनि हुन्छ सक्छ । चितवनको सौराहा क्षेत्र वनजंगलल भरिएको छ । नेपालको आर्कषक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको सौराहा चिवतन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ । हात्ती चढेर जंगल घुम्न पाउनु, राप्ती नदीमा डुंगा सयर गर्नु र सूर्यास्त हेर्नु सौराहाका आर्कषण हुन् । हात्ती चढ्नका लागि १२५० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । बस्नका लागि सुविधासम्पन्न होटलहरु रहेका छन् । साथै यस क्षेत्रमा थारु सँस्कृतिको नाच हेर्न पाइन्छ ।
पाथीभरा ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो । समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाईमा रहेको ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथीभरादेवी विश्वमै प्रख्यात रहेकी छिन् । पाथीभराबाट विश्वका विभिन्न हिमशृखलाहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट दुई दिनको बस यात्रामा पाथीभरा पुग्न सकिन्छ । साथै काठमाडौंबाट मोटरसाइकल तथा निजी सवारी साधननमा पनि पाथीभरा पुग्न सकिन्छ ।
कालिञ्चोक कालिञ्चोक भगवती दोलखा जिल्लामा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । काठमाडौंदेखि चरिकोट १ सय ३२ किलोमिटर पर्छ भने सदरमुकामबाट १५ किलोमिटर उत्तर कालिञ्चोक गासिमा अवस्थित यो मन्दिर समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ८ सय ४२ मिटरको उचाईमा छ ।
कालिञ्चोक भगवती जानका लागि काठमाडौंबाट जाँदा बसपार्कबाट सदरमुकाम (चरिकोट) सम्म बसमा जान सकिन्छ । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकका रमणीय प्राकृतिक स्रोत अलोकन गर्दै खोला नाला, झरणाको दृश्यावलोकन गर्दै चरिकोट पुग्न सकिन्छ ।
चरिकोटसम्म जानका लागि सार्वजनिक यातायात पनि जान सकिन्छ भने त्यहाँबाट हिडेर वा जिपमा पनि जान सकिन्छ । त्यससँगै निजी सवारी साधनमा पनि कालिञ्चोक पुग्न सकिन्छ । कालिञ्चोकको प्रमुख विशेषता भनेको पानी पर्दा र मौसम चिसो हुनासाथ हिउँ पर्न शुरु हुन्छ ।
यहाँबाट रोल्वालिङ हिमश्रृङखला, जुगल, गौरीश्वर, गणेश लगायतका हिमालहरु देख्न सकिन्छ । साथमा शैलुङ डाँडाको दृश्यालोकन गर्न सकिन्छ । यहाँ घुम्न जानेहरुका लागि चौरीको मासु, कुखुरको भाले र फापरको ढिडो, गुन्द्रुक लगात विभिन्न परिकारका खाने कुराहरु पाइन्छन् ।
कालिञ्चोक घुम्न जानेहरु सदरमुकाम चरिकोटबाट आधा घण्टाको दुरीमा रहेको दोलखा भीमेश्वर मन्दिर समेत दर्शन गर्न जान सक्छन् । जहाँ दशैंका समयमा दर्शनार्थीको भीड समेत लाग्ने गर्छ । जिरी दोलखामै अवस्थित जिरी अर्को आकर्षक गन्तव्यका रुपमा परिचित छ । जिरी दोलखाको स्वीजरल्याण्डका रुपमा परिचित छ । काठमाडौंबाट १ सय ८४ किलोमिटर दूरीमा रहेको जिरीको मनमोहक हरियाली र झरना तथा परम्परागत बस्ती पर्यटकका लागि विशेष आकर्षक हुन् ।
जिरी सगरमाथाको प्रवेशद्धार पनि हो । घुम्नलायक स्थानका रुपमा परचित जिरीमा बस्नका लागि उपयुक्त होटलहरुको पनि व्यवस्था छ ।
समुन्द्री सतहबाट १ हजार ९ सय ५ मिटरको उचाईमा रहेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने हो भने २ देखि ३ दिनको अवधिमा जिरी घुम्नका लागि पर्याप्त मानिन्छ । निजी सवारीमा जाँदा १ दिनमै पनि जिरी पुगेर फर्किन सकिन्छ तर आनन्दले घुम्न भने समय पुग्दैन । त्यसकरण दशैंको विदामा जिरी घुम्न उपयुक्त हुन सक्छ ।
जिरी आसपासमा चेर्दुङ र हनुमन्तेबाट रोल्वालिङ हिमालहरु, दोलखा र रामेछापका अधिंकाश गाउँ तथा बस्तीको अवलोकन गर्न सकिन्छ । जनकपुरधाम ऐतिहासिक मन्दिर जनकपुरधाम विश्वभरका हिन्दूहरुको लागि चर्चित रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भीड हुने स्थान पननि हो जनकपुरधाम । जनकपुरमा प्रसिद्ध जानकी मन्दिर, रामन्दिर, विवाह मण्डप, राजदेवी मन्दिर लगायतका क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकिन्छ । साथमा धनुष धामको पुजा, त्यससँगै सिताको विवाह भएको क्षेत्र लगायतका ऐतिहासिक क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
जनकपुरधामको अर्को विशेषता यहाँ रहेका पोखरी एवं कुण्डहरु हुन् । बिहार कुण्ड, अग्नि कुण्ड, मध्यमा सर, रत्न सागर, अंगराज सर, सूर्य कुण्ड,गंगा सागर, दशरथ तलाउ, पापमोचिनी सर, महाराज सागर, पाकवती सर, धौत—पाप सर आदि हुन् ।
लुम्बिन शान्तिका प्रतीक भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पनि बिदा मनाउनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा लिन सकिन्छ । काठमाडौंबाट ३ सय किलोमिटर दुरीमा रहेको लुम्बिनी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै प्रसिद्ध मानिन्छ । संसारभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको लागि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा लिइन्छ ।
लुम्बिनीमा इसापूर्व तेस्रो शताब्दीदेखि सातौं शताब्दीसम्का भग्नावशेषहरु देख्न सकिन्छ । यहाँ मायादेवीको मन्दिर देख्न सकिन्छ ।
विदेशी पर्यटकको समेत मन लोभ्याउने लुम्विनीको क्षेत्रफल ठूलो रहेको छ । जहाँ घुम्नका लागि ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्प्दाहरु देख्न सकिन्छ । यहाँ विभिन्न देशका विहारहरु समेत रहेका छन् । लुम्विनीमा बस्न र खानाका लागि सुविधासम्पन्न होटलहरु रहेका छन् ।
इलाम दशैंको आकर्षक गन्तव्यअन्तर्गत इलाम पनि पर्छ । जुन चियाबारी नामकले विश्वभर प्रख्यात छ । इलाममा घुम्नलायक कन्याम, अन्तुडाँडा, छिन्टापु, पाथिभरा, इलाम बजार रहेका छन् ।
नेपालको पूर्वी क्षेत्र रहेको इलामको मुख्य आकर्षण भनेको चिया बगान हो । इलाममा पिकनिक स्पोर्ट, होमस्टे तथा अवलोकन स्थानहरु प्रशस्तै छन् । राजधानीको कोटेश्वरबाट ६ सय ९० किलोमिटर यात्रा गरेपछि करिब १५ घण्टाको दूरीमा इलाम पुग्न सकिन्छ । निजी सवारीसाधनमा गएमा पनि इलाम सजिलै पुग्न सकिन्छ ।
ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको चिया बगानमा घोडामा चढेर चियाका डाँडाहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ । इलामको अग्लो डाँडो सन्दकपुर ३ हजार ६ सय ३६ मिटर उचाइमा छ । त्यस डाडाबाट कुम्भकर्ण, कञ्चनजंघलगायतका हिमालहरु देखिन्छन् । २ देखि ३ दिनसम्ममा इलामको प्रसिद्ध स्थानहरु घुम्न र होमस्टेमा रात बिताउन सकिन्छ ।
बन्दीपुर दशैं विदा मनाउने आकर्षक गन्तव्यमा बन्दीपुर पनि पर्छ । कोलाहल, धुवाधुलोबाट केही टाढा जाने सोच बनाएकाहरुका लागि आन्नदित ठाउँ हो यो ।
तनहुँ सदरमुकाम दमौलीबाट १८ किलोमिटर डुम्ने हुँदै ८ किलोमिटर उकालो यात्रा तय गरेपछि बन्दीपुर पुगिन्छ । जहाँबाट मनोरम, हिमशश्रृखला, पहाड, टाकुरा हेर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्यता बोकेको बन्दीपुरबाट अन्नपुर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलागिरी लगायतका हिमश्रृखंला देखिन्छ । काठमााडौंबाट मुग्लिन हुँदै डुम्नेसम्म बसमा यात्रा गर्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट पैदलयात्रा पनि गर्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट जीप पनि पाइन्छ ।
भक्तपुरे शैलीमा निर्माण गरिएका घरहरु, टुँडिखेल, थानीमाई, तिनधारा, रानीवन, रामकोट, सुनखरी, खड्गदेवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, सुचना केन्द्र लगायतका स्थलहरु आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाईमा पर्छन् ।
लमजुङ जिल्लामा अवस्थित घलेगाउँ पर्यटीय गन्तव्यका रुपमा विकास हुदै गएको छ । आत्मिय सत्कार, मनमोहक प्रकृति, मौलिक संस्कृति र स्थानीय परिकारको स्वाद एकै ठाउँमा पाइने भएकाले पनि यहाँ पर्यटकको चाप वर्षभरी नै उस्तै हुने गर्छ ।
घलेगाउँको प्रमुख विशेषता भनेको होमस्टे हो । शहरी क्षेत्रमा दशैं मनाउनेहरुका लागि महत्वपुर्ण गन्तव्य बन्न सक्छ घलेगाउँ । जहाँ ग्रामीण जीवनसँग रमाउनका सकिन्छ ।
गुरुङ जातीका मानिसहरु बसोवास गर्दै आएको घलेगाउँमा बारीमा कोदो र ढकमक्क फुलेका सयपत्री फुलसँग झुम्न पाइन्छ । गोर्खा आर्मी पार्क, घले राजाको शालिक, क्वोईवो धी, उत्तरकन्या मन्दिर, सात कुवा, परम्परागत गुरुङ संग्रहालय, चिया बगान, बनजंगल, छहारा, भीर, मौरी भेंडीगोठ घलेगाउँका आकर्षण हुन् । घलेगाउँ जानका लागि निजी सवारी साधनमा जादा राम्रो हुन्छ ।
प्युठान जिल्लामा रहेको स्वर्गद्वारी एक धार्मिक गन्तव्य हो । स्वर्गद्वारी नाम नै काफी छ जहाँ पुग्नेहरु स्वर्गको अनुभुति गर्ने गर्छन् ।
स्वर्गद्धारीबाट धौलागिरी, नीलगिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपुर्ण, लमजुङ, हिमचुली, मनास्लु, चुरेन, पुथालगायतका हिमशृंखलाहरु देखिन्छन् ।
समुन्द्री सतहबाट २ हजार ४८ मिटरको उचाइमा रहेको छ स्वर्गद्धारी । स्वर्गद्धारीमा गुरुकुल विद्यलयहरु छन् । चर्चित धार्मि स्थल स्वर्गद्धारीमा खाना बस्नका लागि राम्रो सुविधा रहेको छ ।
राजधानीबाट ४ सय किलोमिटर दुरीमा रहेको छ स्वर्गद्धारी । काठमाडौंबाट रोल्पा जाने बस चढेर भिग्रीमा ओर्लनुपर्छ । त्यहाँ एक रात बिताएपछि अर्को दिन चार घण्टा पैदल यात्रा गरेपछि स्वर्गद्धारी पुग्न सकिन्छ ।
बस दुर्घटना– हेलिकोप्टर लिएर घाइते लिन पुगे मन्त्री सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना– हेलिकोप्टर लिएर घाइते लिन पुगे मन्त्री सिन्धुपाल्चोकमा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेको नेपाली क्रिकेट टोलीको दुर्भाग्य– ब्याटिङसँग सधैं दुश्मनी ! नेपालमा दशैंको रौनक छाइरहेका बेला नेपाली
– सन्तोषराज पाण्डे
सीको स्वागतका लागि १८ प्रकारका तरकारी र फलफूलबाट बनेको स्वागतद्वार तयार सीको स्वागतका लागि १८ प्रकारका तरकारी र फलफूलबाट बनेको स्वागतद्वार तयार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ चिनियाँ राष्ट्रपति आज भारत जाँदै, स्वागतका लागि चेन्नाइ पुगे मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति आज भारत जाँदै, स्वागतका लागि चेन्नाइ पुगे मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आज भारत जाँदैछन्
साउदी अरबले नेपाललाई ३ अर्ब ऋण दिने साउदी अरबले नेपाललाई ३ अर्ब ऋण दिने काठमाडौं– भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आवासीय भवन, चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन दीर्घकालीन खाका आवश्यकचीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन दीर्घकालीन खाका आवश्यकराष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा
गोली हानी श्रीमती र छोरीको हत्या, छोरामाथि खुकुरी प्रहार गोली हानी श्रीमती र छोरीको हत्या, छोरामाथि खुकुरी प्रहार सिन्धुली– सिन्धुलीको गोलान्चोर गाउँपालिका ६ टेक
फोटोमा हेर्नुहोस्, नेपाल चीन सम्बन्धफोटोमा हेर्नुहोस्, नेपाल चीन सम्बन्धचिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ दुई दिने राजकीय भ्रमणका घुमुवा प्रहरी भन्दै व्यापारीसँग रकम असुल्ने युवक पक्राउघुमुवा प्रहरी भन्दै व्यापारीसँग रकम असुल्ने युवक पक्राउमहोत्तरी- आफू नेपाल प्रहरी प्रदेश नं २ को घुमुवा प्रहरी